Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Jamaika » Jamaica kusaina New MOU yeKushanyirwa Kwekushanya neSpain
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Hon. Edmund Bartlett (kuruboshwe) ari kuita hurukuro neGurukota reSpain reIndasitiri, Kutengeserana, uye Kushanya, Hon. Reyes Maroto, kuFITUR, iyo inonyanya kukosha yepasirese yepasirese yepasirese yekufamba uye kutengeserana show show, ikozvino iri kuitika muMadrid, Spain. Musangano uyu wakazoita kuti pave nechibvumirano chekuumba chibvumirano chekushanda pamwe chete munyaya dzakasiyana dzekusimudzira vashanyi. - Mufananidzo nerubatsiro rweJamaica Ministry of Tourism
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, akazivisa kuti Jamaica neSpain vachagadzira chibvumirano chekunzwisisa kuti vabatane pane zvakasiyana-siyana zvekusimudzira kushanya uye shanduko yehupfumi.
Chiziviso ichi chinotevera musangano wakaitwa negurukota rezvemaindasitiri, kutengeserana, nekushanyirwa kweSpain, Hon. Reyes Maroto, pakutanga nhasi kuFITUR, iyo inonyanya kukosha yepasirese yepasirese yepasirese yekufamba uye kutengeserana show show, ikozvino iri kuitika muMadrid, Spain. Pamusoro peDominican Republic, inova gore rino FITUR Partner Country, FITUR inounza pamwe chete nyika dzinosvika zana dzine makumi manomwe anomiririra zviri pamutemo.
“Ndinofara zvikuru kuzivisa izvozvo Jamaika uye Spain ichagadzira memorandamu yekunzwisisa yekubatana munzvimbo dzakasiyana dzekusimudzira kushanya. Ini naGurukota Morato nhasi takava nenhaurirano dzakadzama maererano nenzvimbo dzakasiyana-siyana dzekugadziridza uye kufungidzira zvakare kwekushanya semutyairi wekusimudzira hupfumi neshanduko, "akadaro Bartlett.
"Takakurukura nezvebasa reUnited Nations World Tourism Organisation senzvimbo yakakosha yekuwana zvikumbiro zvedzidzo uye zvinoshanda zvakakosha kuvandudza kushanya kutsva kunogonesa nyika diki nevatambi vepakati nepakati kuti vave neruzivo rwakaenzana uye kuti vadzoke. yakawanda yemari yakarasika,” akawedzera.
Jamaica mutungamiri wepfungwa.
Bartlett akashandisawo mukana uyu kukoka Gurukota Morato kuJamaica yekutanga-nguva yeGlobal Tourism Resilience Day, yakarongerwa Kukadzi 17, 2022, kuWorld Expo kuDubai. Zuva richatarisa pakugona kwenyika kuvaka hunyanzvi hwekupindura kuvhundutsa kwepasirese uye kwepasirese uye kukwanisa kufanotaura nechokwadi chikuru mhinduro dzavo. Zvichabatsirawo nyika mukunzwisisa uye kudzikisira mhedzisiro yekukatyamadzwa uku pakukura kwavo, asi zvakanyanya kukosha, zvichavabatsira kubata uye kupora nekukurumidza mushure mekuvhunduka uku.
"Jamaica zvechokwadi mutungamiri wepfungwa munzvimbo ino, uye takazvipira kushanda nevatinoshanda navo vese kuvaka nyika yakasimba, inoshanda, uye yakatsiga inogona kupindura zvirinani kune zvinokatyamadza zvinouya apo isu tinoenderera mberi nerwendo urwu rwehupenyu, ” akadaro Bartlett.
Jamaika Sangano Resilience Spa Speini ushanyi United Nations World Tourism Sangano